Dr Khin Mg Lwin and Daung (July 10/2021) – PVTV Myanmar
khin hninoo says:
2021-07-10 at 8:07 PM
Thank you for your attention👍
November Nu Nu November Nu Nu says:
2021-07-10 at 8:27 PM
DEE PHALA says:
Kyaw soe Han says:
စစ္ ေဘးကင္း ေဝးကြပါေစ
2021-07-10 at 9:16 PM
​ေကျးဇူးပါ ဆရာ​ေရာ​ေဒါင်းပါ pvtv အဖွဲ.သား​ေတွ​ေရာအားလံုးကို
2021-07-10 at 9:34 PM
Why destroyed sound, what kind of vaccine ?
2021-07-10 at 9:36 PM
2021-07-10 at 9:45 PM
ရအောင်တော့ တိုက်ခိုက်သာွး ရမာဆရာဒေါင်ရေ
ဟုတ်တယ် ဆရာ ပြော သာမုန်သယ်
2021-07-10 at 9:51 PM
ပြည်သူကလဲ cdm ပါပဲ။
ပြည်သူ​​တွေက CDM ဆရာ ဝန်​တွေကို နားလည်ပြီးသားပါ
2021-07-10 at 11:11 PM
thank all of you Please take care all of your health we must to be win
ဆရာလေးစားပါတယ်၊ ပြည်သူတွေ ကိုဗစ်ဘေးမှအမြန်ဆုံးကင်းဝေး၍အေးချမ်းနိုင်ပါစေ။
2021-07-11 at 3:33 AM
2021-07-11 at 7:00 AM
2021-07-11 at 9:52 AM
တွေးကြည့်တိုင်း စဉ်းစားတိုင်း ငိုချင်တယ် ဘာလို့ ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်လာရတာလဲ ကျနော်မလိုချင်ဘူး
2021-07-11 at 12:01 PM
Myint Myint Htay says:
2021-07-11 at 1:35 PM
ေမာင္ေလး ေဒါင္းေလး ဘုရားသခင္သာ၍ ျမင့္ ျမတ္ေသာစိတ္ကိုေပး ပါေစ
ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ် မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ မိစ္ဆာတွေကြောင့်ဆိုတာ ငြင်းမရဘူး
MayThet Khine says:
2021-07-11 at 3:39 PM
So so sick of propaganda from both side. When our country will be free and tell the truth. Always bias and partisan. Until now risk people life with their greedy. So so so sickening for that act.
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရက ကိုဗစ် ၁၉ ဗဟုသုတစင်တာ ဖေ့ဘွတ်ပေ့ချ်ကို ဇူလိုင်လ ၄ရက်နေ…